बलियो सरकार कसरी थलियो ?
विश्वको दाँजोमा हेर्दा यस्तो लाग्छ; नेपाल अझै कोरोनाको कम क्षतिमा छ, हामी केही प्रतिशत सुरक्षितै छौँ । अमेरिका, बेलायत, रुस, भारतलगायत अन्य देशहरूमा लाखौं संक्रमित थपिँदै गर्दा हाम्रोमा बल्ल तिसौं हजारको संख्यामा कोरोना संक्रमित पुगेका छन्, यो सुखद भने पटक्कै होइन । तर पनि संक्रमित र निको हुनेको संख्या तुलना गर्दा केहि आशाका किरणहरु पोखिन्छन् । पछिल्लो चरणको परिणामले भने फेरि थप चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
कोरोना समुदायस्तरमै फैलिएको होकि भन्ने ठूलो आशंका पैदा गराएको छ । राजधानीलगायत देशका ठूल्ठूला शहरदेखि ग्रामीण भेगसम्मै कोरोना अकल्पनीय ढंगले फैलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यत्रतत्र त्राहीमामको वातावरण छ । कोरोनाले निकट भविष्यमै विकराल अवस्था निम्त्याउने प्रवल सम्भावना छ । झण्डै चार महिनाको बन्दाबन्दीले अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन केहि सहज बन्न नपाउँदै पुनः खतराको घण्टी बज्न थालेको छ । विगतको बन्दाबन्दीको मोडल अहिले र अहिलेको मोडल पहिले गरेको भए सायद देशले अझै छ महिनाको लकडाउन धान्न सक्थ्यो कि भन्ने आशय राख्न सकिन्छ । सरकारले उल्टो कदम चालेकै कारण यो दुर्नियत भोग्नुपरेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले सकेको गर्‍यो तर नसकेको पनि सक्नेगरी प्रयास अहिलेसम्म गरेको छैन । जनताको भरपूर समर्थन पाएको सरकार हो भनिन्छ तर यो सरकार आफ्नै सिङ भाँचेर बसेको छ । कोरोना मात्रै होइन अहिले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्राकृतिक विपत्तिले वितण्डा मच्चाइरहेको छ । जनताका बस्तीहरू उजाडिएका छन्, सयौंले ज्यान गुमाएका छन् । यो कहालीलाग्दो चित्र जति हेर्‍यो उति मन धुजा हुन्छ ।
साँच्चिकै भन्नुपर्दा दिनहुँ कोरोनाले मान्छे मरेका, पहिरोले बस्ती नै बगाएका र डुबानमा परेका समाचारले हृदय नै क्षतविक्षत बनाउँछ । आफ्ना जनताको घाउमा मलहम लगाउन नसकेको सरकारको कुन शब्दले महिमा गरौं । जनताको घरबाट बलियो भएर स्थिरताको शुभ साइतमा हिंडेको सरकार अचानक बीच बाटोमै कसरी थलियो भन्ने कुरा जनताले कहिलेसम्ममा थाहा पाउलान् ? जनताले कोरोनाबाट मुक्ति पाउने जुक्ति कहिले फुर्छ सरकार ? कोरोनाले सिङ्गो देश नै निल्न आँट्यो नेताकाजीहरूको आँटचाहिँ के रहेछ, बुझ्न मन लाग्यो ।
छिमेकी देश भारतमा एकदिनमा पचास हजारको हाराहारीमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरू पत्ता लाग्छन् तर हाम्रोमा भने दिनमा सात सयको हाराहारीमा मात्रै नयाँ संक्रमित भेटिन्छन् । यो दुई ग्राफलाई तुलना गर्दा भारतको एक दिनको क्षमता बराबर पुग्न हामीलाई लगभग दुई महिना लाग्दोरहेछ । यो ढिलासुस्तीले हामीलाई संक्रमित छुट्याउनलाई मात्र अझै एक वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बाँकी कार्यभार त सोच्नै नसकिनेगरी लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । हामी किन यतिसारो निकम्मा र निम्छरो हुन पुग्यौं यसको उत्तर भेटिन्न । यी हरेक प्रश्नहरूका चाङ सरकारलाई बुझाउने हो भने सरकार नै प्रश्नचिह्नको पछाडि लुक्ने छ । देश कुनै अमूक पार्टी र गुटले मात्र चलाएको छ कि जनताको म्यान्डेडले चलेको छ ? सरकार नीति र सिद्धान्तको मेचमा घुमेको छ कि दलाल र भ्रष्टहरुको वरिपरि घुमेको छ ? जनताले प्रश्न सोध्ने धृष्टता नराखे पनि उत्तर सुन्ने धैर्यता त गर्छन् है, यति हेक्का त राखौं सबैले ।
भारतसँगको खुल्ला सिमानाले गर्दा नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा छ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ । हिजो नेताहरू आफूलाई हाइलाइट बनाउन सिमानामा तारजाली लगाउने गफ हांक्थे तर आज कुन दुलोमा छिरे पत्तो छैन । बोली समेत बिक्न छाडेकाहरू जनताको पीडामा झल्याकझुलुक हुन्छन् तर मसानझैं विलय हुन्छन् । सिमानाकाहरूमा कडाइ हुन नसक्दा कोरोनाको जोखिम झन् चुलिएको हो । सरकारले जनतालाई जगाउन पनि सकेन, जोगाउन पनि सकेन र विश्वासमा लिन झनै सकेन । सत्ताको जत्था गुड जोगाउन तल्लीन, प्रतिपक्षी पार्टीको बीउ जोगाउने ध्याउन्न, अरू पार्टी त दुई दिनका पाहुना, आउँछन् पलेटी कसेर सोहर्छन् जान्छन् । देश र जनता बचाउने स्वयं देश र जनता नै हुन् । सरकारले हालसम्म कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च त जसोतसो देखायो तर त्यसको नतिजा देखिनेगरी देखिएन ।
कोरोना भाइरसले सुरूसुरूमा जसरी अनुशासित बनाएको थियो अहिले ठीक विपरीत भएकोले यो खतरा निम्तिएको हो । धेरैले कोरोनालाई रोग होइन भोकको रूपमा बुझे । रोग त निको भइजाला तर यो भोकभन्दा मीठो भोजन हो भन्ने बुझाइले अधिकांशको मानसपटल हल्लियो । आफू र परिवारको जीवन धान्नकै लागि मानिसहरूले डरको सीमा नाँघ्न थाले । कोरोनाको शून्य प्रवाह गर्दै स्वतन्त्र बन्न बेरै लागेन । निर्वाध हिडडूल र जमघटले कोरोना झन् बल्झिन पुग्यो र आज फेरि सकसको स्थिति बन्दै छ । जीवन प्यारो हो नै तर जिउन नजान्दा ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्छ । हामीलाई अमेरिका, रूस, चीन, बेलायत र भारत बन्नु छ तर त्यहाँको जस्तो विकराल रूप व्यहोर्नु छैन यो कोरोनाको ।
सारा दुनियाँ कोरोनासँग एकनास लडिरहेको छ तर हामी आफैमा टकराव गर्दैछौं । योबीचमा सबैभन्दा धेरै गद्दार गर्ने प्रधानमन्त्री ओली अनि उनको पार्टी नेकपा नै हो । किनभने सरकारको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सत्ताको चकटीमा छताछुल्ल हुनेगरी पोख्ने दुई पात्र केपी र प्रचण्ड हुन् । नेपालको राजनीतिलाई गणतन्त्रको धारसम्म डोर्‍याउने जस लिने यी दुईले संकटमा देश र जनतालाई धोका दिएको अपजस पनि लिनैपर्छ । धेरैले प्रचण्डलाई डाइनामिक लिडर भन्छन् तर उनी अल्फ्रेड नोवलले आविष्कार गरेको डाइनामाइट जस्तै लाग्छ, जसले निर्माण भन्दा बढी ध्वंस मच्चायो । ओलीलाई राजनीतिको ओलम्पिक नै जितेझैं लाग्दोहो तर उपाधि चुम्ने अवसर गुमाइसके उनले । दुनियाँको अगाडि भकुण्डो हातले च्यापेर गोलपोष्टमा छिराए, अहिले उफ्रिपाफ्री गर्दैछन्, तुस पछि पो देखिन्छ त कामरेड ।
जनताको अभिमत सरकारलाई ‘पोच्ड एग’ जस्तै भयो, खायो सक्कियो तर खानेचाहिँ बलवान् बन्यो । विश्वव्यापी महामारीबाट आफू बच्न सरकारले छल गर्‍यो तर जनतालाई बचाउन त्यति बल गर्‍यो जस्तो लागेन । आज कोरोना संक्रमित नागरिकहरूले उचित समयमा उपचार पाइराखेका छैनन्, घरभित्रै रोग पालेर भोको पेट बस्नुपरेको छ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू अव्यवस्थित छन् । कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ बेलैमा हुन सकिरहेको छैन । कोरोना खरायोको गतिमा दौडिरहेको छ भने सरकार कछुवा गतिमा पछि लाग्दैछ । जनता मरेको खबरले हाम्रा प्रधानमन्त्री कतिचोटी भक्कानिए होला, कठै ! सायद हरेक दिन एक छाक बार्दा हुन् प्रधानमन्त्रीले । कति लोकप्रिय प्रधानमन्त्री भेट्टाएको छ यो देशले जो जनता मर्दा पनि कुर्सीमुनि लुकामारी खेलिरहन्छन्, पद र शक्तिको भोगविलाश राखिरहन्छन् निरन्तर ।
हुन त सरकारलाई गाली गर्न पो सजिलो छ । जति गरे नि नदेख्ने अति गरेको मात्रै देख्ने जनता भएरै नि होला सरकारको काम गर्ने जाँगर हराएको अचेल । यसको सब राज भनेको म सरकारलाई राम्रैसँग चिन्छु तर ऊ मलाई चिन्दैन र जान्दैन पनि । म अँधेरो छिद्रबाट सरकार चियाउँदै छु तर सरकार मलाई बालै दिन्न ।
यत्रो भयावह अवस्थामा च्याउ उम्रेसरी उम्रिएका राजनीतिक दलहरूले कुनै योजना र अग्रसरता देखाउन सकेनन् । ती पार्टीहरूलाई थ्रेसहोल्डको ठूलै डर छ तर कोरोनाले आफ्ना मतदाता मर्लान् कि भन्ने चिन्ता छैन सायद । यदि यो हुन्थ्यो भने साना-ठूला सबै दलहरूले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आ-आफ्ना कार्ययोजना र राय सुझाव सरकारलाई बुझाउँथे । सरकारले पनि कान खोलेर सुन्ने हिम्मत राख्थ्यो कि ! सरकारले काम गरेको हो तर मध्यरातमा जोगीले शंख फुकेझैं गरि काम गर्‍यो । सबैले देख्नेगरी केहि गर्न सकेन । सरकारले गाग्री भर्‍यो पिँध चुहिएको चाल पाएन । जनताको गुनासो सरकार नसुन्ने अनि सरकारको दुःखेसो कसलाई पोख्ने र सुन्ने ?
अरू कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा लिने त संसारकै रित हो । तर अरू कमजोर हुँदा आफू कामचोर भइयो भने सर्लक्कै डुबिन्छ । सरकारभित्र खेल्ने खेलाडी सब एक सय एक छन् । सबैले मौकाको फाइदा उठाउन ढुकिबसे । ढोकाढोकामा लुकिबसे । कसले कसको खुट्टो तान्यो स्पष्ट अझै छैन तर योचाहिँ प्रष्ट देखियो कि सबले कुर्सी तानातान गरे, झण्डै हानाहानसम्म गरे । हामी जनता वाल्ल परिरह्यौं । अब रह्यो सरकार किन थलियो भन्ने जिज्ञासा । सत्तामा हुनेहरू सबै बलिया बन्न खोजे त्यसैले सरकार कमजोर बन्यो । बलियो बन्न काम गर्नुपर्छ भन्ने ब्रह्म कसैको खुलेन खालि पद र कुर्सी नै सर्वस्व ठानियो ।
इतिहासमा सबैभन्दा बदनामी पार्टीको रूपमा नेकपा दर्ज भयो जसले कात्रोमाथि पनि कमिशन खायो । नागरिक सर्वोच्चतालाई खाडलमा पुरियो । क्षमता भनेको बढाए बढ्छ तर नेकपाको सरकारको शक्ति संचय हुन सकेन । समस्याको अघि थलियो तर पनि मै हुँ भन्न छाडिएको छैन । सबैलाई थाहा छ लोग्ने-स्वास्नीको झगडा परालको आगो हो भनेर तर नेकपाको झगडा भुसको आगो हो जुन एकदिन भस्म भएरै छाड्छ ।
नेकपा यसरी कमजोर भयो कि अब ऊ बलियो भयो भने देश र लोकतन्त्र नै कमजोर बन्न पुग्छ । जनै चुडालेर जज्ञमा बस्ने बाहुन र विधिको शासन मिचेर सत्ताराज गर्ने ओली एकै हुन् । अब बलियाहरू आफै टाउको फुटाएर सकिन्छन् र कमजोरहरू फेरि बलिया बन्नेछन् । आशा गरौं, घडीको सुइले राजनीतिमा बाह्र नबजाओस्, फेरि दलहरू आहालमा नफर्किऊन्, शहीदको रगतले पोतिएको वीरताको गाथा नच्यातून् र कोरोनाले दुर्गन्धित राजनीतिलाई मलजल नगरोस् ।
विवेकशील र साझाको एकताले हुर्काएको आशा
किताब, क्याफे र मेरो मृत्यु
परदेशीको चिट्ठी- कोरोनाबाट बच्दै दशैं मनाऔं, आफ्नो सुरक्षा आफैं गरौं
बच्चाका आनीबानीले हैरान हुनुहुन्छ ?
नयाँ दिल्लीमा चिनियाँ जासुसको साइबर जालोः कति जायज ? कति नाजायज ?
अर्थ / व्यापार, फिचर पोस्ट, ब्लग
जीवन बीमाको अभिकर्ताले के-के बिक्री गर्नुपर्दछ ?
कंगनामाथि राजनीतिक प्रतिशोधको कारबाही गरियो
यस्तो छ कोरोनाको संकटपछि आत्महत्याको अवस्था
मर्निङवाक गरेर बिपीको घरमा जान्थें
‘ओलीलाई भेटाउनुस्, हरेक नागरिकले आँखा जुधाएर कुरा गर्नेछन्’
अग्रणी शहीद क. सुरेश वाग्लेको स्मृतिमा
समाधानले निम्त्याएको समस्याको लहरो
दैनिक जीवनमा बीमाको महत्व किन छ ? हेर्नुहोस् कारणहरु
जमीन कि रोजगारी ?
न्याय हराएको देशबाट …